Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Motorola Droid Razr
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Motorola Droid Razr
Waxaa jira sababo badan oo xaaladaha keeni kara in aad iska yareyso sawiro aad on your Motorola Droid Razr ama aad casriga ah ee guud. Waxay noqon kartaa sababta oo ah casriga ah glitchy, version buggy ee nidaamka qalliinka ah, waxaad soo celin telefoonka goob warshad, aad iftiimiyo aad ROM, aad rujin aad telefoon ama qalad ugu badan, aad si qalad ah la tirtiro sawirrada.
Wax kasta oo sabab u yahay, aad rabto in aad sawiro kuwa dib. Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waa xal aad u heshid dhibaatadaada. Tani waxay awood leh qalab soo kaban karto, inta badan, in aan la dhihi lumay kasta / tirtirto xogta aad casriga ah, oo mid ka mid ah ay macquul yahay inuu ka soo kabsado photos tirtiray. Ka soo kabashada aad sawiro tirtiray la Dr.Fone u android ayaa marnaba iyagoo fudud. Software waxa la dhisay fikradda ah la siiyo waayo-aragnimo user ugu fiican oo u fudud in ay macaamiisha. Dhammaan waxa aad u baahan doontaa in aad sameysid qaar ka mid ah waa lagu magcaabo on your computer iyo aad casriga ah iyo in ay tahay, inta kale waa la qaadi doonaa daryeelka by Dr.Fone u android.
Waxaa jira hal wax muhiim ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato. Ha isticmaalin aad casriga ah ka dib markii ay sawiro la tirtiro, sababtoo ah haddii ay jirto xog cusub overwrite aad sawiro delete by qaadashada meesha ku xasuusta telefoonada meesha isticmaalka sawirka tirtiray in uu noqdo, markaas Dr.Fone for Android Ma laga yaabaa in ay awoodaan in ay u soo kabsadaan. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad of software ah si ay u hayso wax fikrad ah oo ku saabsan.
Halkan edbinta ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida inuu ka soo kabsado xiriirada tirtiray ka razr Droid.
Tallaabada 1. Isku aad Droid razr Motorola si aad u computer
Ka dib marka aad ku rakibtay software ah, fadlan la bilaabi Dr.Fone for Android. Waxaad heli doontaa suuqa kala muhiimsan ee hoos ku waydiinaya inaad xiro qalabka aad, xilligan fadlan surin-in aad Motorola Droid razr in computer si ay u bilaabi karo habka dib u soo kabashada.
Talaabada 2. Diyaari in baarista Motorola razr Droid
Ka dib markii isku xira qalab si aad u computer ka, Dr.Fone u android aqoonsan doonaa casriga ah iyo si toos ah u soo celin doonaa tallaabada xigta. Riix bilowga button mar kasta oo aad diyaar u tahay. Waxay markaas ku bilaaban doono falanqeeyo qalab aad.
Tallaabada 3. o
Halkaa marka ay marayso, Dr.Fone ee Android lagu baar doonaa Motorola Droid Razr. Waxay qaadan doontaa oo keliya xoogaa ilbiriqsiyo ah.
Tallaabada 4. Khalkhalgelinta casriga ah
By ka dibna, waxaad arki doontaa ah pop-up aad Motorola Droid Razr codsanaya inaad u ogolaato qalab aad u noqon in hab user super. Just guji ogolow aad Motorola Droid Razr ka dibna riix Start on your computer inay sii wadaan geeddi-socodka.
Tallaabada 5. Scanning
Halkaa marka ay marayso, Dr.Fone u android waxaa baar xusuusta oo dhan aad Droid razr Motorola iyo kabsanaya ma aha oo kaliya xiriirada tirtirto, laakiin, waxa uu soo kabsaday xog kale oo ku saabsan casriga ah sida tusaale ahaan; aad sawiro, fariimaha, Cajalado, iwm .. ku xiran baaxadda xusuusta ee casriga ah, waxa laga yaabaa inay qaataan muddo ah. Sidaas iska baashaasho oo sug Dr.Fone u android inuu shuqulkiisii ​​qabsado.
Tallaabada 6. Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos tirtiray
Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan sawiro aad, hubi in sanduuqa Gallery in Column ugu horeysay waxaa sax oo guji badhanka soo kabsado. Haddii aad rabto in aad ku eegaan sawirada aad dooro sawir gaar ah in aad rabto in aad soo kabsado, fadlan sax sanduuqa ku xiga si ay sawir aad rabto in aad soo kabsado guji soo kabsado.
Download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin a day hore.
All u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan nidaamka xijaab EFI
Siduu u Pexagon Flash Drive Data Recovery
M4A Recovery: Ladnaansho tirtiray ama musuq M4A Faylal ay si sahlan